Malunga neNtshatsheli-Zhejiang CHAMPION Plastic Machinery Co., Ltd.
(Ifinyeziweyo OMSHISHINI WE-CHAMPION)
Yayisaziwa njengeShanghai CHAMPION Plastic Machinery Co., Ltd. Lishishini lesizwe lobugcisa obuphezulu kunye noovulindlela abakhethekileyo ekuvelisweni kwemigca yemveliso eyahlukeneyo yeplastiki esebenza ngokuphezulu. Umzi-mveliso umi kunxweme oluhle lwe-TAIHU echibini "CHANGXING" isixeko. Indawo yokwakha ingaphezulu kwe-20000 square metres.
OMSHISHINI CHAMPION uzibophelele kuphuhliso, uyilo, uphando kunye nemveliso ezahlukeneyo ezikumgangatho ophezulu imigca imveliso extrusion sheet.
Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yophuhliso kunye nokutsha, ngenxa yezixhobo zobugcisa ezikhethekileyo kunye nenkonzo ecingisisiweyo, inkampani yethu yamkelwa kakuhle ngabathengi basekhaya nabangaphandle.
Sibonelela nge gqibezela inkonzo yomjikelo wobomi bethu abathengi
Ukuqala kwingxoxo yeemfuno zoomatshini, ukuthunyelwa kunye nokufakwa komatshini, kunye nokuveliswa kweemveliso eziphezulu. Ngokwesiseko sobuchule bobugcisa kunye nenkqubo yenethiwekhi yedijithali. I-Shanghai CHAMPION ithembisa ukunika izisombululo zobugcisa kwiiyure ezingama-24 kuyo nayiphi na eminye imibuzo, kwaye ibonelele ngoncedo lokusebenza kude ukuba kuyimfuneko, ukuze uzisombulule iingxaki zakho ngexesha elifutshane.
● Ukubonelela ngenkonzo yobugcisa yomjikelo wobomi kubathengi bethu
● Yiba noxanduva lokuthunyelwa koomatshini, ukufakwa kunye noqeqesho
● Ubonelelo lwexesha elide lwezincedisi kunye neendawo ezisecaleni
Intshatsheli izibophelele kuphando oluzimeleyo kunye nophuhliso. Sineminyaka engaphezu kwama-30 yamava kushishino extrusion.
Oomatshini be-Champion banenkqubo yokulawula imveliso epheleleyo, ulawulo olungqongqo ukusuka ekuthengeni, ukulawula umgangatho, ukuvelisa, ukuhlola, umatshini wokuvavanya, ukuthunyelwa. Indibaniselwano egqibeleleyo yezixhobo eziphambili kunye nobuchwepheshe bokubonelela ngesiqinisekiso esithembekileyo somgangatho wemveliso.
Itekhnoloji ye-automatization extrusion isetyenziswe kumatshini wethu. Umatshini we-extrusion ufikelela kwinani lokwenyani lobukrelekrele kunye nobudala bothungelwano ngobuchwephesha obutsha.
Xhobisa inkqubo yolawulo lwe-SIEMENS ephezulu yoluhlu olupheleleyo lwe-extrusion line. Inkqubo yokulawula edibeneyo yenza ukuba umatshini usebenze uzinzile.
Uyilo lwesakhiwo somntu, ngokweemfuno zabathengi yenza uyilo olukhethekileyo kunye nemveliso.
Uphuhliso oluzinzileyo noluzinzileyo, ukunika imbuyekezo enkulu kubaninizabelo kunye namaqabane asebenzayo
Yiba lishishini apho abasebenzi banokuzingca ngalo ngokunyusa iwonga labo kunye nomfanekiso webrand
Nika ingqalelo kuxanduva loshishino lwentlalo, ukunceda amashishini ahluphekayo enze okuncinci kwawo
Uphuhliso oluqhubekayo noluzinzileyo, kwaye sizame ukulima ngokunzulu kwintsimi yemveliso yenkampani
Gxininisa kuphuhliso lwexesha elide lweshishini, hayi ngenxa yeminqweno yenkampani ukulimaza ixabiso lomthengi
Ukukhangela amaqabane exesha elide ukukhula kunye